Ndị mgbasa ozi na blọọgụ njem | Njem zuru oke
You bụ ụlọ ọrụ nke mpaghara njem Ichoro igbasa ozi n ’Intanet? Mgbe ahụ Njem zuru oke bụ ihe ị na-achọ. Netwọk ọdịnaya anyị na-enye gị nkwado nkewa nkewa nke ukwuu ka mkpọsa gị wee nwee ihe ịga nke ọma.
Anyị nwere blọọgụ raara nye:
obodo nke ụwa
mba nke ụwa
njem gburugburu: njem, ụgbọ elu, ebe mmiri na oke osimiri, wdg.
Anyị na-arụ ọrụ na ụdị ọkọlọtọ bụ isi na ahịa - megabanner, onye na-ezu ohi na peeji, Sky, ... - yana ụdị ọkọlọtọ ọgaranya ma ọ bụ njikọta dị elu. Kpọtụrụ anyị ka anyị nata ohere niile na ọnụego mgbasa ozi.